Par Taratra sur 11/08/2020
Nidina ifotony ny talem-paritry ny Filaminam-bahoaka ao amin’ny faritra Diana hijery ny sakana nataon’ny polisim-pirenena ao Ambatoharanana Ambilobe. Fantatra nandritra izany fa maro ireo fiara iombonana mitondra mpandeha tsy mandalo io sakana io fa mivily lalan-kafa. Vokany, fiara efatra indray tratra ary naiditra « fourrière » taorian’ny fitsirihana nataon’ny polisy io lalana io. Notazonina nanaovana fanadihadiana kosa ny mpamily.
Taorian’ny fampanoavana, ny zoma lasa teo, naiditra am-ponja vonjimaika avy hatrany ny mpiasan’ny Jirama miisa roa avy ao Ambovombe sy lehilahy telo hafa voarohirohy tamin’ny halatra gazoala tao an-toerana, ny 3 aogotsitra lasa teo. Tsiahivina fa tra-tehaky ny zandary mpanao fisafoana tamin’ny 3 ora maraina ireo lehilahy roa. Nitondra « jerricans » 20 litatra miisa roa feno gazoala izy ireo.
Voasambotry ny polisy, ny alakamisy lasa teo, ny ampahany amin’ireo andian-jiolahy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ilay mpandraharaha ara-toekarena ao Toamasina, ny asabotsy 20 jona hifoha ny alahady 21 jona 2020. Nametraka fitoriana olon-tsy fantatra ny fianakaviana. Niainga avy amin’izany ny fanadihadiana nataon’ny polisy. Nisy ny angom-baovao voaray ka nahafahana nisambotra ireo jiolahy telo.